ဓာတ်ပုံဖြင့်အလိမ်ခံရခြင်း ပုံဖော်ခံရခြင်းPHOTOS THAT LIE,INFLAME, and KILL | democracy for burma
ဓာတ်ပုံဖြင့်အလိမ်ခံရခြင်း ပုံဖော်ခံရခြင်းPHOTOS THAT LIE,INFLAME, and KILL
tags: BBC, Burma, CNN, MEDIA LIES, Myanmar, New York Times, Photos
လားရှိုးမှာအမှန်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကမြို့ကျဉ်းတော့အပြည့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သွားလာနေကြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမလေးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကအတုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒီလိုရိုင်းစိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးနာမည်ဖျက်ချင်လို့ခရီးသွားတဲ့လူအုပ်ကိုဓာတ်ပုံကိုဖျက်၊ဒုတ်ကိုင်တဲ့ပုံတွေနဲ့ထည့်ပြီးအကွက်ကျကျစီစဉ်တာပါတဲ့ရှင်။တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဖို့နည်းပေါင်းစုံသုံးညာတာပဲရှင်၊ဒါကြောင့်ဘာကိုမဆိုသေချာစဉ်းစားပြီးမှချင့်ယုံဖို့လိုပါတယ်။ အခုနိုင်ငံခြားသားတွေကပဲပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနေကြပါပြီ။ အစကသူတို့မသိပါဘူး၊ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အင်မတန်ချစ်စဖွယ်ဓလေ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီလိုအကုန်လုံးပါဝင်လာတာလဲမေးခွန်းထုတ်လာကြရာကနေအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့အားလုံးညီညွတ်ဖို့ကအဓိကကြပါတယ်။ ကိုယ့်အခြင်းခြင်းသွေးကွဲရင်တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျဖို့ပဲရှင်။ ဒီကိစ္စမှာအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ပုံရိပ်နဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုနာမည်ဖျက်ဖို့ကျိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာနောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေကိုသုံးသပ်နိုင်ကြပါစေရှင်။
PHOTOS THAT LIE,INFLAME, and KILL
A PHOTO, taken in Lashio, Burma/Myanmar, which many people and news agencies held up asproof and evidence that Burma has extremist,nationalist, racist, genocidal Buddhist mobs onthe rampage WAS DOCTORED – TO MAKE ITLOOK LIKE A VIOLENT ARMED MOBThe photo was taken by Mohamed Gemunu Amarasinge,aMuslim from Malaysia. He isa so-called photojournalist, being paid generously by the Organization of Islamic Cooperation(OIC). Foracouple of years he has been reporting and photographing, withasevere bias, todemonize and falsely accuse the Buddhists, and to make the Muslims appear as innocent victims who never cause or start any of the violence between Muslims and Buddhists.Fortunately, he madeabig mistake. He shot some photos on fast burst mode, and he releasedtwo of those photos, but he only doctored one of them. The doctored photo was the one sent tothe news agencies – BBC, CNN, New York Times, The Guardian, etc. He might have forgottenthat the un-doctored photo was somewhere on the internet.Notice all the sticks below, but in the other photo,ahalf second later, where are the sticks?
To read more: http://www.scribd.com/doc/149141184/PHOTOS-THAT-LIE-INFLAME-and-KILL
← Buddhist Women Interfaith Marriage Law is Necessary to Protect the Burmese Buddhist Women’s Rights
U WIRA THU : Open Letter to “Ms. Hannah Beech (TIME Magazine)”-ENGLISH →